UPDATE: Puntland oo adkeynaysa sugida Bad-qabka Imtixaanka xili ay DFS ku fashilantay. – Puntlandtimes
GAROOWE(P-TIMES)- Wasaaraddaha Waxbarashada iyo Arrimaha gudaha ee Puntland ayaa qoraalo ay si wadajir ah u soo saareen, waxay kaga hadleen Imtixaanka Shahaadiga ah ee Puntland oo dhici doono 18-ka bishan sidii loo adkeyn lahaa, xili kii dawladda Faderaalka Soomaaliya uu fashilmay oo laga helay Suuqyada.
Wasaaradda Waxbarashada & Taciinta Sare ayaa warqad qoraal ah oo ay u dirtay Wasaaraddaha Arrimaha gudaha iyo Amniga, waxay codsatay in lagala shaqeeyo badqabka Amni ee Imtixaanka Shahaadiga ah, waxayna sheegeen in ay doonayaan in laga caawiyo sugida Ammaanka.
Wasiirka Arrimaha gudaha, Dawladdaha Hoose iyo Horumarinta Reer Miyiga Maxamed Cabdirahmaan Dhabancad oo warqad kale soo saaray ayaa ku amray dhammaan maamulada gobalada iyo degmooyinka Puntland in ay feejignaan dheeraad ah, muujiyaan oo ay adkeeyaan Imtixaanka.
Mr, Dhabancad ayaa sheegay in looga baahan yahay maamuladu in ay gacan ka siiyaan wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare, sidii ay hab nabadgalyo ah ugu dhici lahaayeen Imtixaanka Shahaadiga ah oo muhiimad weyn ugu fadhiya Ardayda Puntland.
Warsidaha Puntlandtimes.com, wuxuu ogaaday in Madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni uu kulan arrimaha Imtixaanka ku saabsan la yeeshay masuuliyiinta u qaabilsan dhanka Waxbarashada, oo uu ku amray in ay taxadar weyn muujiyaan.
Wasaaraddaha Waxbarashada ee Puntland iyo dawladda Faderaalka khilaaf xoogan ayaa u dhaxeeya, kaas oo ku saabsan galida Imtixaanka Shahaadiga ee dawladda dhexe diyaarisay oo ay diiday Puntland in ay ka qeybgasho, ka dibna Imtixaankii Faderaalka laga helay Suuqyada isagoo Iib ah.